မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: မိခင်တဦး၏ ABSDF(မြောက်ပိုင်း)သတ်ဖြတ်မှု ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း
မိခင်တဦး၏ ABSDF(မြောက်ပိုင်း)သတ်ဖြတ်မှု ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း
by Ko Lin Wai Aung on Tuesday, March 6, 2012 at 11:00am ·
ဒီနေ့ဒီရက်ဟာဖြင့် ကိုယ့်အဖို့ ဘယ်လိုမှမျှော်မှန်း မထားမိခဲ့တဲ့ အရာတခုကို
နံက်၉နာရီအရောက် အလက(၄) ကို စတုတ္ထတန်းအဖြေလွှာစစ်ဆေးဘို့
ကျောင်းရောက်တော့ကိုယ် စစ်ဆေးရမဲ့ ENGLISH ဘာသာရပ်အတွက်
ဒီကပြီးရင် အခြေခံပညာသွားဘို့ ချိန်းထား တာလဲရှိတာနဲ့ ကိုယ်စစ်ရမဲ့နံပါတ်တွေအပြီးစစ်ဆေးပြီးရင် နေ့လည်တစ်နာရီလောက်
အခြေခံပညာသွားဘို့ အုပ်စုခေါင်းဆောင် ဆရာမကြီးကိုခွင့်ပန်လိုက်တယ်….
ရုံးရှေ့လဲရောက်ရော ကိုယ့်ကျောင်းကအထွေထွေလုပ်သားနဲ့ အမက(၁၆)က အထွေထွေလုပ်သား(၂)ယောက် ထိုင်နေတာတွေ့ရတယ်
တွေ့တွေ့ချင်းဘဲကိုယ့်ကျောင်းက အထွေထွေလုပ်သားက ဆရာမကြီးအိမ်က
စာကိုထုတ်ဖတ်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်း ဆရာမကြီးက ရေးပေးလိုက်တဲ့စာ…
အိမ်မှာဧည့်သည်နှစ်ယောက် ရောက်နေလို့ အမြန်ပြန်လာဘို့…
၀မ်းသာအားရနဲ့ ဆိုက်ကား ငှားပြီး အိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာတယ်… ရုံးကိုလဲကိုယ့်အထွေထွေလုပ်သားနဲ့ဘဲအခြေခံပညာမသွားတော့ဘူးလို့ ပြောခိုင်းလိုက်တယ်….
ကားစောင့်ရင်ကြာမှာစိုးလို့ ဆိုပြီး ဆိုက်ကားငှားစီးသွားတာ…
.ရောက်ချင်ဇောနဲ့ဆင်းပြီးတောင် ပြေးချင်စိတ် ပေါက်လာတယ်
…နောက်မှဘဲ အချိန်တန်တော့ရောက်မှာဘဲဆိုပြီး ကြိတ်မှိတ်ပြီးလိုက်လာတယ်… ဒါနဲ့အိမ်နားရောက်လာတယ်…
အိမ်ထဲကိုမ၀ံ့မရဲနဲ့ဝင်လာတော့ ကိုယ့်အမျိုးသားနဲ့ ဧည့်သည်(၂)ယောက်တွေ့ရတယ်… ကိုယ်ကလဲ ကိုယ့်အမျိုးသားကို ရှင်ကဘယ်လိုရာက်နေတာလဲမေးတော့
မင်းရဲ့သမီးစုနန္ဒာလွင် ဖုန်းဆက်လို့ ပြန်လာရတာတဲ့.
နှုတ်မဆက်မိဘဲ စာကိုအလောတ ကြီး ဖတ်လိုက်တယ်…
စာထဲမှာက…အဖေနဲ့အမေတဲ့…ကျွန်တော်ဟာ န၀တ ထောက်လှမ်းရေးလုပ်မိလို့ ကျွန်တော့်ကို ကျောင်း သားတပ်မတော်က ဖမ်းထားပါတယ်တဲ့…
အဲဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့အသက်ရှင်ရေးအတွက် အဖေနဲ့အမေ တယောက် ယောက်လာရောက်
အာမခံပြီးခေါ်မှ အသက်ချမ်းသာရမှာလို့ သူရှိရာတပ်စခန်းကို
အမြန်ဆုံးလိုက်လာဘို့ ခေါ်တဲ့ စာဖြစ်နေတယ်…
ဒါနဲ့ကိုယ်လဲအရမ်းကို စိတ်တွေထူပူလာပြီး ဒီစာကိုဘယ်လိုရတာလဲ…
သူပြီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီလက သူ့ညီလဲ အဲဒီထဲရောက်နေတာ အရဲစွန့်သွားတာ ဟိုရောက်တော့ကျောင်းသား(၈၀)ကျော်ကိုဖမ်းထားပြီး
န၀တ ထောက် လှမ်းရေးလို့စွပ်စွဲပြီးတော့ (၁၅) ယောက်ကိုသတ်လိုက်ကြတယ်…
ကျန်တဲ့(၆၅)ယောက်ထဲက စီစစ်ပြီး မိဘလက် ထဲပြန်အပ်သင့်တဲ့သူကို ပြန်အပ်မယ်… သူတိုနဲ့လက်တွဲရမယ့်လူကို ဆက်ပြီးလက်တွဲမယ်ဆိုပြီးတော့
သူ့ညီအပါ အ၀င် ကျွန်မတို့မိဘ(၆)ဦးနဲ့ ပေါင်း(၇)ဦးကိုခေါ်ပေးပါဆိုလို့
ဒီစာနဲ့အတူလာရတဲ့အကြောင်း စခန်းကို(၂၀)မတ် အရောက်သွားရမဲ့အကြောင်း လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲမန္တလေးကို (၁၂.၃.၉၂) အရောက်လာဘို့အကြောင်း ပြောပြီး
မန္တလေးထောက်လှမ်းရေးကဗိုလ်ကြီးနာမည်နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးတယ်…
အနွေးထည် ခြေအိပ် လက်အိပ် ခေါင်းစွပ်ကစ လုံလုံလောက်လောက်ယူခဲ့ဘို့ အကြောင်းနဲ့….
ကိုယ်လဲဒါဖြင့် နယ်မြေထောက်လှမ်းရေးကို သတင်းပို့မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ ရပါတယ်ပို့ပါတဲ့… သူလဲအားလုံးကိုသတင်းပို့ပြီးမှ လာတာပါလို့ပြောတယ်…
အဲဒီလိုပြောနေတုံးမှာဘဲ နယ်မြေထောက်လှမ်းရေးက (၂)ယောက်ရောက်လာပြီး
ကိုမောင်မောင်က သူသွားခဲ့ရပုံနဲ့ ခုထိအခြေအနေကိုရှင်းပြတယ်…
ဒါနဲ့ကိုမောင် မောင်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်မသားစာကိုပါယူသွားပြီး ကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်…
ဒါနဲ့ဘဲကိုယ်လဲ ကိုမောင်မောင်နဲ့ စကားသိပ်မပြောလိုက်ရဘူး…
.ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာထင့်နေတာပေါ့…လိမ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ ဘာဖြစ် ဖြစ်ပေါ့ ….စေတနာနဲ့လာတဲ့သူတွေဆိုရင်အားနာစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့…
ငါ့တော့ကို မောင်မောင်က မလိုက်ရဘူးပြောတယ်…
ကဲ ကိုယ်လိုက်ရင် ကိုယ့် ကိုဟိုဘက်ကသူပုန်က သတ်ပစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ …မတတ်နိုင်ဘူးလေ…သတ်ပစ်လဲသတ်ပစ်…ဖမ်းလဲဖမ်းပါ စေ…
ငါ့သားအသက်ရှင်ရေးအတွက် သွားကိုသွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…
အဲဒါနဲ့ဘဲ ကန်ဘဲ့လမ်းက အန်ကယ်ကြီးရောက်လာတယ်…
စာလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ သွားရင်အား လုံးတိုင်ပင်ပြီး သွားကြဘို့လာပြောတယ်… ၀ဏ္ဏဇော်အိမ်ကိုလာရှာတာ မတွေ့သေးတဲ့အကြောင်းပြောတယ်…
ကိုယ်လဲသူတို့ ဇီးကွက်မှတ်တိုင်နားမှာ နေတဲ့အကြောင်း သွားပြောပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်တယ်…
အန်ကယ်ကြီးတို့က ဖေဖေါ်ဝါရီလမတိုင်ခင်ကတည်းက သိနေတယ်ဆိုတာ နောက်မှသိရတယ်.
ကိုမောင်မောင်လဲ သာယာဝတီနဲ့ပဲခူးကမိဘတွေဆီ ဆက်ပြီးသွားရမှာဆိုတဲ့အကြောင်း သိရတယ်…
စစ်တပ်ကဘဲဖမ်းမိလို့ နယ်စပ်တနေရာကနေခေါ်ပြီး မိဘထံပြန်အပ်ဖို့လား…
နောက် န၀တ အစိုးရကဖမ်းမှာစိုးလို့ တိမ်းရှောင်နေတယ်ဆိုတာ ဘဲ သိတယ်… ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတာမသိဘူး…
ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ န၀တ ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆို တော့
နှစ်ကလည်း(၂)နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ သူ့အတွက် စွန့် လွှတ်ပြီး ပူပန်သောကတွေကို ဘုရားနဲ့ဖြေပြီးနေရတယ်…
ဘုရားဖက်တော့ အသက်ရှည်ဆိုသလို ကိုယ်လဲ အရင် ကလို တပိန်ပိန် တလိန်လိန် မဟုတ်တော့ဘူး….
တနေ့တော့မသေရင်ပြန်တွေ့ရမှာဘဲလို့ ယူဆပြီးစိတ်ဖြေနေရတယ် …ဗေဒင်တို့အကြားအမြင်တို့မေး လိုက်ရင်လည်း အသက်ရှင်လျှက်ရှိတယ်…
လို့ဟောထားတော့ ငါ့သားတော့မသေသေးဘူး လို့ဆိုပြီး စိတ်ကိုဖြေနေရတဲ့အချိန်မှာ
ဒီစာကိုရလာတော့ အိပ်မ ပျော် စားမ၀င်နဲ့ တိုင်ပင်လိုက် ဆွေးနွေးလိုက်နဲ့ အဲဒီညကအချိန်ကုန်တာပါဘဲ….
၀မ်းသာလွန်းလို့ သူလာခဲ့မယ်ဆိုတာပြောလိုက် တယ်…
သတင်းအစအနပျောက်နေတဲ့သားဆီက စာလေးတစောင် ရောက်လာလို့
တအိမ်သားလုံး ၀မ်းသာမဆုံး တွေးတောမဆုံး ဖြစ်နေရတယ်….
ကိုယ်တို့ကျောင်းကလည်း မပိတ်သေးတော့ စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပေမယ့်
ကျောင်းကိုသွား ရုံးကိုသွားနေရ တယ်…
ကိုယ့်ကိစ္စလဲလုပ်ရင်း၊ကျောင်းကိစ္စလဲ လုပ်ရင်း ပေါ့လေ…
ရုံးရောက်တော့ အစ်မကြီးလိုခင်တဲ့ ဆရာမကြီးကိုပြောပြတော့
ညကBBC ကလည်းကျောင်း သားတွေအကြောင်း အသံလွှင့်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ ပိုပြီးစိတ်ပူနေတာပေါ့…
.ကိုမောင်မောင်ပြန်လာတာက ကြာပြီဆိုတော့ ဒီကြားထဲမှာများ သတ်များသတ်ပစ်လိုက်ပြီလား….
အမျိုးသားကလည်း သူရုံးမသွားခင် ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးကဗိုလ်မှူးတစ်ယောက်နဲ့ ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက် လာတဲ့အကြောင်း…
တကယ်လို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ဆီကို သတင်းပို့ပါလို့ ပြောသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့
NATIONS သတင်းစာမှာ -
ကျွန်မတို့ကလေး( ၇ ) ယောက်ထဲက(၃) ယောက်နဲ့ တစ်ခြားကလေး(၂)ယောက် (၅) ယောက်ပုံပါလာပြီး ကျောင်းသားတွေရဲ့လုပ်ရပ်ကို ရေးထားတဲ့ အကြောင်း ဓာတ်ပုံလည်းပြတယ်တဲ့…
အမျိုးမျိုးထင်ကြေးတွေ ပေးပြီး တစ်ညကုန်ရတော့တာပါဘဲ….
အမျိုးသားကိုလည်းသွားဘို့ကိစ္စ ၀ိုင်းပြီးငွေရှာ ပေးဘို့ပြောတယ်… သူလည်းမရှာတတ်ဘူးတဲ့…
အဲဒီနေ့လုပ်သားသတင်းစာထဲမှာ မကဒတ(မပ)ကကျောင်းသား(၈၀)ဖမ်းပြီး န၀တ ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွပ်စွဲထာတဲ့အကြောင်း (၁၅)ဦးကိုသတ်ပြီး
ကျန်တဲ့သူတွေကို မိဘဆီအပ်မည့်သူနဲ့ သူတို့နဲ့ပြန်လက်တွဲမည့်သူ တွေကိုစီစစ်နေတယ်
ညနေကျတော့ ငွေ၃၀၀၀ကျပ် ကိုယ့်ကိုလာပေးတယ်…
အဲဒီနေ့မှာဘဲ မနက်ပိုင်း ၀ဏ္ဏဇော်အမေ ဒေါ်ရီရီခင်ဆီသွားတော့ သူအတော်အံ့သြနေတယ်…
ကိုယ်ကသာ သူ့သားပါမှန်းသိတာကိုး… သူကကိုယ့်သားပါမှန်းမသိဘူး….
ကိုယ်ပါမှန်း လိုက်မယ်မှန်းသိတော့ သူလိုက်မယ်တဲ့…
အစကတော့မသိတဲ့သူတွေနဲ့ သွားရမှာဆိုတော့ သူလိုက်ဘို့စဉ်းစားနေရတယ်တဲ့…
ကိုယ်လည်းသူပါတယ်ဆိုတော့ အားရှိသွားတာပေါ့….လမ်းမှာဘာကိစ္စဘဲဖြစ် ဖြစ် ကိုယ်နဲ့တိုင်ပင်ဖေါ်ရတာပေါ့….
အတူသွားရမဲ့လူတွေရင်းနှီးအောင်လို့ ဆိုပြီး ခေါ်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့ သားတွေသမီးတွေရေးပေးလိုက်တဲ့စာကို လဲလှယ်ဖတ်ကြည့်တော့
လက်ရေးမတူ ပေမယ့် စာသားကတစ်ပုံစံတည်းဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်… ဒါဆိုတွေးရတာပေါ့လေ…
အကြပ်ကိုင်ပြီးရေးခိုင်းတာ လား လို့တော့ မိဘတွေကတွေးကြတာပေါ့…
မိဘတိုင်းကသားသမီးတွေဟာ ဘာအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာ သိတာဘဲ…
ဒီလို န၀တ ထောက်လှမ်းရေး လုပ်တယ်လို့ ရေးထားတာ လိမ်ညာပြီး ရေးတယ်ဆိုတာ အားလုံးကသိနေကြတယ်…
သူတို့ရဲ့အသက်ဘေး ကြောင့်ရေးရတာဆိုတာကိုလည်း တွေးမိပါတယ်…
သွားဘို့ရက်ကိုလည်း ( ၁၁.၃.၁၉၉၂ ) ရက်နေ့သွားဘို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်…
သားသမီးတွေကိုပထမ မွေးဖွားစဉ်က ဆေးရုံမှာအသက်စွန့်ပြီးမွေးခဲ့ရသလို
ခုလဲသားသမီးတွေကို ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားပေးကြရမှာ ဖြစ် တဲ့အကြောင်း
ခက်ခဲပြီး ပိုပြီး အသက်စွန့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဖြစ်ကြတယ်…
ကိုယ်ကလည်းမန္တလေးကို လုံးဝမရောက်ဖူးတော့
အန်ကယ်ကြီးတိုနဲ့တဲတာကအစ နေတာအဆုံး အတူ လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်…
အန်ကယ်ကြီးကလက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါ အထက်တန်းလက်မှတ်ဝယ်မယ်လို့ ပြောသွားတယ်…
ကိုယ်တို့ကငွေရေးကြေးရေးကသူတို့လောက်အစဉ်မပြေတော့ ရိုးရိုးတန်းကဘဲလိုက်မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်…
( ၆.၃.၁၉၉၂ ) နဲ့ ( ၇.၃.၁၉၉၂ ) မှာတော့ ကျောင်းကိစ္စ ရုံးကိစ္စနဲ့ဘဲအချိန်ကုန်တယ်…ကျောင်းကဆရာမ တွေကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး
အိမ်ပြန်ရောက် တော့လည်း ကိုယ့်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ သားအတွက်ဓာတ်ပုံစီစဉ်ရတယ်…
သားအတွက်လိုင်စင်ဓာတ်ပုံကမရှိတော့ ကျောင်းမှာ စာအုပ်ထုတ်တဲ့ကဒ်ပြားကပုံကိုဘဲကူးယူရတယ်…
ကူးလဲပြီးရော ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ လုပ်သားကောလိပ်လို့ ပါနေတာ ကူးလိုက်တော့
အလိုလိုကမှ န၀တ ထောက်လှမ်းရေး လို့စွပ်စွဲနေရတဲ့အထဲ ဓာတ်ပုံမှာတပ်သားလို့ပါနေတော့ ကတ်ကျေးနဲ့ညှပ်ပစ်လိုက်ရတယ်…
အန်ကယ်ကြီးအိမ်(3/C )ကန်ဘဲ့ကို သွားတော့ ကိုယ်တို့ရှေ့မှာတင် ကားတစ်စီးဝင်သွားတယ်…
အထဲရောက်တော့ စမ်းချောင်းကဧည့်သည် (၂)ယောက် လည်းရောက်နေတယ်…
အားလုံးတိုင်ပင်ကြပြီး ဟိုရောက်ရင် ဘယ်လိုပြော ဘယ်လိုနေ ဆိုတာတွေ ကိုအန်ကယ်ကြီးကပြောပြတယ်…
လက်မှတ်ကို မနက်ဖြန်မနက်ဝယ်ရအောင် ဘူတာကြီးမှာဆုံဘို့ချိန်းခဲ့ကြတယ်…
မတွေ့ခဲ့ရလို့စာရေး ထားခဲ့ရတယ်…ည၉နာရီဖုန်းထပ်ဆက်မှတွေ့ရတယ်…ကိုမောင်မောင်က ဦးဇော်ခင်သူတည်းတဲ့နေရာကို ဘယ်လို သိလဲမသိဘူး…ရောက်လာပြီးတော့… ဟိုတယ်ရှေ့ကနေ…မန္တလေးက MI နှစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့ဆိုပြီး
မန္တလေးကို၁၂.၃.၉၂ အ ရောက်လာမယ်ဆိုတာလည်းပြောလိုက်တယ်…
.ပဲခူးကမိဘတစ်ယောက်ကသူ့အစီအစဉ်နဲ့သွားပြီး မန္တလေးကျမှဆုံမယ်လို့သိရတယ်….
.လက်မှတ်ဝယ်ပြီးမိဘတွေကခုမှသိရတာဆိုပေမဲ့ ဘ၀တူတွေဆိုပြီး ပိုပြီးခင်မင်မှုရကြတယ်…..
ရထားလက်မှတ်ရပြီးတာနဲ့ ကျောင်းမှာမိဘဆရာအသင်း အစည်းဝေးရှိလို့ သွားရတယ်…
.ပြောပြီးရုံးမှာဆရာမကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ထိုင်နေတုံး ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး
ကိုယ့်သားသမီးရရှိရေးအတွက် အတိုက်အခံပြောရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ဖက်ကိုပုတ်ခတ်ပြီးမပြောဘို့ပြောတယ်…
ဟိုဘက်ကသိရင်ကလေးတွေအတွက် အခက်အခဲဖြစ်မှာစိုးလို့ ပြောပြီး… အားလုံးအစဉ်ပြေမှာပါလို့ပြောတယ်….
.ကျမကရုံးမှာ နေခဲ့ပြီး ဒေါ်ရီရီခင်ကိုတော့ ဓာတ်ပုံရွေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့ မြို့ထဲကိုလိုက်ပို့လိုက်ကြတယ်…..
သမီးတွေကို သွားခေါ်ရမှာဆိုတော့ ၀မ်းသာနေကြတာပေါ့…..
.မန္တလေးရောက်တော့အန်ကယ်ကြီးတို့အဒေါ်အိမ်ကို သွားကြတယ်…
.ကိုမောင်မောင်က ခေါင်းဆောင်သွားမှာဆိုတော့ ပူးတဲ့ငွေသူ့ကိုအပ်ထားကြတယ်…..
လားရှိုးလက်မှတ်ကို ကိုမောင်မောင်ဘဲ သွားဝယ်တယ်…..
ကိုမောင်မောင်ဆီကအပြန် ဈေးချိုထဲမှာထမင်းစားပြီး ဘုရားကြီးကိုသွားကြတယ်….တည်းတဲ့အိမ်မှာမနက်က
လူပိုမခေါ်ခဲ့ဘို့မှာထားတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြပြီး စာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့
လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ ကျောင်းတိုက်ကိုလိုက်ပို့တယ်…
ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရေမိုးချိုးပြီး အ၀တ်၃စုံဘဲထည့်ထားပြီး မလိုတာတွေကို မန္တလေးမှာဘဲထားခဲ့ကြ တယ် ….အိမ်ရှင်တွေကိုဘုရားဖူးဆက်ထွက်မယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ရတယ်…..
အဲဒီမှာကျောင်းသားအဖွဲ့ကမှာလိုက်တဲ့ လမုန့် ထိုးမုန့်တို့ကို ကိုမောင်မောင်က၀ယ်လာတယ်…
လူပိုမလိုက်ရဘူးဆိုလို့ မန္တလေးမှာကျန်ခဲ့တယ်…
မန္တလေးကစထွက်တော့ သားတွေနဲ့တွေ့ဘို့နီးပြီဆိုပြီးဝမ်းသာကြတာပေါ့
ကောင်းအတူ ဆိုးအတူ ကူညီပြီးသွားပါ့မယ်လို့ မှာခဲ့ကြတယ်…
မနက်၅း၀၀နာရီထိုးတော့ ကားဂိတ်သွားပြီး မူဆယ် လားရှိုး နမ့်ခမ်း ကားပေါ်တက်ကြတယ်…
၅း၃၀မှာကားစထွက်ပြီး လားရှိုးအထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ အစစ်ဆေးခံဘို့ ကားတွေတန်းစီစောင့်ကြရတယ်…
မွတ်ဆလင်ကုလားတွေကို တရုပ်ပြည်နယ်စပ်ဘက်မသွားဘို့ဆိုပြီး ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားတယ်တဲ့…..
တစ်နာရီလောက်ကြာလာတော့ကားပေါ်ကသူတွေ ပွက်လောရိုက်ကုန်ရော…အချိန်မှီ ရောက်ချင်တယ်….
.ဗိုလ်ကြီးကမရှိတော့အားလုံး ကားပေါ်က ဆင်းနေခဲ့ကြရတယ်….ကားကဆက်ထွက်သွားတယ်…
တည်းခိုခန်းမှာ နေတုံး ၁း၀၀နာရီမှာ ထလရ၉
ကဗိုလ်ကြီးက အားလုံးနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ သွားရတယ်….
တပ်မှူးကိုလည်းတင်ပြထားကြောင်း သွားမည့်သူအမည်နဲ့ သားတွေရဲ့အမည်ကိုမှတ်ထားလိုက်တယ်…
.မနက်တုံးကလည်း ဂိတ်မှာကိုယ်တို့(၇)ယောက်ကိုလူတွေက ဘယ်လိုထင်မလဲ…
အန်တီကြီးကညဘက်ခေါပုတ်ကင်စားချင်တယ်ဆိုလို့ သွားစားကြတာ အန်တီကြီးပိုက်ဆံအိတ်ကျပျောက်သွားတယ်…၂၀၀၀ကျပ်လောက်ပါသွားတယ်…
.သိန္နီလွန်ပြီး ကွတ်ခိုင်ရောက်တော့ ထမင်း စားကြတယ်…
အန်တီကြီးက၁၃ဂဏန်းမကြိုက်လို့( A )လို့ပြောင်းရေးပေးကြတယ်…
၄း၀၀နာရီထိုးတော့ တည်းခိုခန်းကထွက်ပြီး ညဈေးဘက်သွားကြတယ်….
တရုပ်ပြည်ကြယ်ခေါင်ဂိတ်ကိုရောက်သွားတယ်… မူဆယ်နဲ့ကြယ်ခေါင်က မြေတစ်ဆက်တည်းဘာမှမခြားဘူး…
…ချစ်လ္ဘက်ရည် ဆိုင်က ABSDF ကဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပေါ့…အဲဒီမှာစခန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမည့်သူနဲ့သွားတွေ့ရတယ်
CS သံချောင်းရဲ့ရဲဘော်လေး မိုးကြိုးဆိုတာနဲ့တွေ့တယ်…
မကြာခင်မှာရှေ့နားက စားပွဲကနေ ကျောင်းသား၃ယောက် ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့လုပ်နေတယ်…..ကျော်မြင့်နဲ့လည်းတိုးတိုးပြောနေကြတယ်…
သူတို့ပါတီမှာနေတုံးက ကိုယ်သွားရင်းလာရင်းနဲ့ မန္တလေး(ဆေး)
က အောင်နိုင်လို့ ပြောပြထားလို့သိတာပါ…
ဒါပေမယ့်သူက မမှတ်မိတာလား မသိချင်ဟန်ဆောင်နေတာလားမသိဘူး…
.သွားခါနီး သမီးအကြီးက အောင်နိုင်အဲဒီမှာ
ဒါပေမယ့်သူတို့အဖွဲ့က ကိုယ်တို့အဖွဲ့ကို ဘာမှနှုတ်ဆက်တာမရှိဘူး….
by Ko Lin Wai Aung on Tuesday, March 6, 2012 at 11:26am ·
၄း၀၀နာရီထိုးတော့ တည်းခိုခန်းကထွက်ပြီး ညဈေးဘက်သွားကြတယ်…..အဝေးပြေးဂိတ်မှာကားတစ်စင်း
ဖြတ်ပြီးနာရီဝက်လောက်သွားရတယ်… တရုပ်ပြည်ကြယ်ခေါင်ဂိတ်ကိုရောက်သွားတယ်… မူဆယ်နဲ့ကြယ်ခေါင်က မြေတစ်ဆက်တည်းဘာမှမခြားဘူး….နယ်ခြားကျောက်တိုင်လေးဘဲခြားထားတယ်…
ရွှေလီမြို့ထဲကိုရောက်လာကြတယ်…ယိုးဒယားတန်းကိုဖြတ်ပြီး ချစ်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ကိုသွားကြတယ်…ချစ်လ္ဘက်ရည် ဆိုင်က ABSDF ကဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပေါ့…အဲဒီမှာစခန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမည့်သူနဲ့သွားတွေ့ရတယ်…ရောက်ရောက်
ချင်းမတွေ့ရသေးဘူး…CS သံချောင်းရဲ့ရဲဘော်လေး မိုးကြိုးဆိုတာနဲ့တွေ့တယ်…အသက်၂၀တောင်ရှိပုံမရဘူး…
မကြာခင်မှာရှေ့နားက စားပွဲကနေ ကျောင်းသား၃ယောက် ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့လုပ်နေတယ်…..
အောင်နိုင်ကိုသိတာက သားကဘောင်ဒရီလမ်း သူတို့ပါတီမှာနေတုံးက ကိုယ်သွားရင်းလာရင်းနဲ့ မန္တလေး(ဆေး)
က အောင်နိုင်လို့ ပြောပြထားလို့သိတာပါ…ဒါပေမယ့်သူက မမှတ်မိတာလား မသိချင်ဟန်ဆောင်နေတာလားမသိ
လည်းဆိုတော့ မြက်ခင်းသစ်ထဲမှာသူတို့အကြောင်းပါထားတာကိုး…..သွားခါနီး သမီးအကြီးက အောင်နိုင်အဲဒီမှာ
ဒါပေမယ့်သူတို့အဖွဲ့က ကိုယ်တို့အဖွဲ့ကို ဘာမှနှုတ်ဆက်တာမရှိဘူး…..စိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်လူပါး
တွေကိုတခုခု လုပ်မှာစိုးလို့ ပေးပါ့မယ်လို့ပြောကြတယ်…..သိရတာက ကိုယ်တို့ကို ရွှေလီကနေ စခန်းအရောက်
ဘက်လို့ ထင်တယ်…နာရီဝက်လောက် သွားရတယ်…မြေပြန့်ဒေသဆိုတော့ ပဲ၊ဂျုံ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက် အသီးအနှံ တွေစိုက်ထားတာ တွေ့ရတယ်…နောင်တောင်းရောက်တော့ ကလေးမလေးတွေက စက်ဘီးငှားမလားဆိုပြီး အ ပြေးအလွှားမေးကြတယ်…နောက်မှသိရတာက စက်ဘီးငှားစီးသွားရင် နမ့်ခမ်းထိသွားလို့ရတယ်လို့သိရတယ်…
တရုပ်ရဲစခန်းရောက်တော့၁၂း၀၀နာရီထိုးပြီ….အရာရှိက ပုံစံစာရွက်တွေ သော့ခတ်ထားခဲ့လို့ ညနေ၃း၀၀ မှရမယ်ဆိုလို့ စောင့်ရတယ်…ကားသမားက၄း၀၀နာရီမှပြန်လာခေါ်မယ်ဆိုပြီးကားဆွဲဘို့ထွက်သွားတယ်…
ကိုယ်တို့လည်းဗမာပြည်လိုမှတ်ပြီး အမြန်ပြီးအောင် ပိုက်ဆံနဲနဲ ပေးလိုက်ပါလား လို့ပြောတော့ တရုပ်ပြည်ကဒီလို လာပ် ပေးလာတ်ယူ လုပ်လို့မရဘူးတဲ့…ဒါနဲ့ခရီးကလည်းပန်း ခြေထောက်ကလည်းညောင်းမို့
ရုံးရှေ့ကခုံရှည်ပေါ်မှာထိုင်ရင်း ခြေထောက်ကိုအပေါ်တင်ပြီး တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်နေလိုက်တယ်…
အဲဒါတရုပ် ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ရှူးရှူးရှဲရှဲရောက်လာပြီး ဒီလိုမထိုင်ရဘူး ခြေထောက်အောက်ချထိုင်ရ မယ် ပြောလို့ အရေးတကြီးချထိုင်ရတယ်…သြော်.. သူတို့ယဉ်ကျေးမှုကိုတော်တော်အလေးပေးသားဘဲပေါ့….
ဒါပေမယ့်အိမ်သာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာအညံ့ဆုံးနဲ့ အညစ်ပတ်ဆုံးပါဘဲ…..အိမ်သာမဖြစ်မနေသွားတော့လည်း…
အထဲမှာ အဖွားကြီး၃ယောက်တန်းစီ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာတွေ့တယ်…. ပထမတော့လန့်သွားတာပေါ့….နောက်
တော့မထူးပါဘူးဆိုပြီး သူတို့ဘေးကအလွတ်မှာဝင်ထိုင်ပြီး အပေါ့ အလေးသွားရတယ်…
နယ်စပ်ကယူနန်တရုပ်တိုင်းရင်းသားတွေက ရင်ဖုံး(သို့)ရင်စေ့အင်္ကျီနဲ့ထဘီဝတ်တယ်…ဘီးကျော့ပတ် တွေနဲ့ အညာအဖွားကြီး တွေနဲ့တူတယ်….နမ့်ခမ်းနဲ့နီးတော့တရုပ်လိုရော ရှမ်းလိုရောပြောတတ်ကြတယ်…..
၃း၀၀နာရီမှာတရုပ်အရာရှိရောက်လာလို့ FORM တွေဖြည့်ရတယ်….ကိုမောင်မောင်ကအရင်လာတုံးစာ
အုပ်ရှိထားလို့ထပ်လုပ်စရာမလိုဘူး….FORM ဖြည့်ပေးမယ့်ကားသမားမရှိလို့ စတိုးဆိုင်ကတရုပ်မလေးကိုတစ်
အားလုံးပြီးတော့ကားသမားကိုစောင့်ပြီးရွှေလီကချစ်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်….အဲဒီမှာ ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့အဖွဲ့ကိုတွေ့တယ်…ဘာမှမပြောဘူး…..ကျော်မြင့်ကမနက်၆း၃၀လာဘို့ချိန်းတယ်….ငြိမ်းချမ်းတည်းခိုခန်းမှာ
သွားတည်းကြတယ်…ညနေစာကို ၇၈၆ ဆိုင်မှာသွားစားကြတယ်…ဦးအေးနိုင်ကတရုပ်လိုမမှာတတ်လို့လက်ညှိုး
ထိုးပြပြီးမှာရတယ်…အနားကစားပွဲမှာလက်တွေမြှောက်ပြီး အော်ဟစ်နေတာတွေ့လို့ မေးတော့ အဲဒါကစားနည်း
မသိတဲ့သူဆိုရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုပြီး ဆိုင်ထဲကထွက်ပြေးသွားမလားဘဲ…စားသောက်ပြီးကြတော့ ပိုက်ဆံရှင်းဘို့ ခေါ်တော့ အမျိုးသမီးကဘာဟင်းတွေနဲ့စားကြတာလည်းလို့ ဗမာလိုပြောရော……….
ဦးအေးနိုင်ကဒေါသအရမ်းဖြစ်သွားပြီး ထပြီးရိုက်ချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာတယ်လို့ပြောတယ်…ဟင်းမှာ တုံးက ဗမာလိုလုံးဝမတတ်သလိုနေနေပြီး ငွေရှင်းမယ်ဆိုတော့မှဗမာလိုပြောတယ်ဆိုပြီးပေါ့…..ရွှေလီမှာအဲဒီလိုအ
( ၁၉.၃.၁၉၉၂ )
တယ်တဲ့…သူ့ကိုသွားစကားမပြောဘို့ကိုမောင်မောင်က ပြောတယ်…သူလည်းကိုယ်တို့နဲ့အတူ စခန်းကိုပြန်လိုက်
ဗျူဟာ( ၂ ) ဘက်ကပြန်လာတာလို့နောက်မှသိရတယ်….ဗျူဟာ(၂)ကဗန်းမော်ဘက်မှာရှိတာလို့ သိရတယ်….
တည်းခိုခန်းမှာကတည်းက တိုင်ပင်လာတာက ကလေးတွေပါလာရင် ရွှေလီမှာ၂ရက်၃ရက်နေပြီး စားချင်
တာစား ၀ယ်ချင်တာဝယ်ပြီးမှ ပြန်မယ်လို့ပြောထားကြတယ်….၁၀း၃၀လောက်ရွှေလီကထွက်လာကြတယ်……
နောက်တော့ဥက္ကဋ္ဌက ကိုမောင်မောင်ကို မိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ခိုင်းတယ်….တဦးချင်းမိတ်ဆက်ပြီးစကားနဲ
ကျနော်တို့စစ်ရင်းနဲ့လက်လွန်သွားလို့ဆိုပြီး မြေပုံဘဲ တွေ့ရမလား…
.ကိုယ်တို့နောက်ကတစ်ယောက်က(၅၀၁)ရင်းမှူး သိုက်ထွန်းဦးဆိုတာ သိရတယ်…
.ဆမားရောက်မှကိုယ့်ကို အန်တီက ကိုရဲအမေလား…
.ကိုရဲဖမ်းတုံးကသူမျက်ရည်ကျရတဲ့အ ကြောင်း …
.ကိုရဲနဲ့သူနဲ့အတူအိပ် အတူစား နေခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ….
.ရှေ့တန်းသွားလည်း အတူတူဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ….သူကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကလာခဲ့တဲ့အကြောင်း…
၀င်းဝင်းကြိုင်ကိုတော့ သိကြောင်း ပြောပြတယ်….
တယ်…..( ကိုအာယုဆိုတာက ကိုဇာဂနာရဲ့ညီတစ်ဝမ်းကွဲပါ )
.ဒါနဲ့သားနေကောင်းရဲ့လားမေးတော့ ဟိုတလောကထုံဖြစ်လို့ဆေးထိုးရတဲ့အကြောင်း သူတို့ကိုဘယ်လိုမှမထင်ပါနဲ့တဲ့…စိတ်မရှိပါနဲ့တဲ့….
ဖမ်းထားတာဆိုတော့ အချုပ်ထောင်ထဲမှာနေရတာဆိုတော့ အပြင်မှာလိုမဟုတ်ကြောင်း ပြောတယ်…..
.ဒီလိုနဲ့ဆက်ထွက်လာကြတာ ရှားဟော့ပါဆိုတဲ့ရွာ ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်
..KIA ဂိတ်ကိုပထမတွေ့ရတယ်….KIA ရဲမေတွေစောင့်တယ်.
.ကိုက်၅၀လောက်သွားပြီးတော့ ABSDF ဂိတ်ကိုရောက်တယ်…
တခါမှမမျှော်မှန်းမိတဲ့ အရပ်ဒေသ အဖွဲ့အစည်း သူပုန်စခန်းကိုရောက်နေတာအရမ်းအံ့သြမိတယ်….
ဒါနဲ့ကားစက်ပြန်နှိုးလို့ရတော့ တောင်ကွေ့တစ်ခုလည်းကွေ့လိုက်ရော ခန်းမတစ်ခုရှေ့မှာကားကိုထိုးရပ်လိုက်
တယ်….ကားပေါ်ကဆင်းတော့ မိန်းကလေးတွေ ယောင်္ကျားလေးတွေဝိုင်းလာကြတယ်….
သူတို့ကKIA ကအဖွားကြီးတွေပါလာတယ်ထင်လို့…..နောက်မှမိဘတွေမှန်းသိပြီး အထုတ်တွေဝိုင်း
ဆွဲကြပြီး စစ်ရုံးဆီခေါ်လာကြတယ်….စစ်ရုံးရှေ့မှာ ပါလာတဲ့အထုတ်တွေကိုရှာဖွေကြတယ်….နောက်အခန်းထဲ
ခေါ်သွားပြီး ကိုယ်တို့အမျိုးသမီးတွေကို ကျောင်းသူလေးတွေက တစ်ယောက်စီ ကိုယ်ပေါ်မှာရှာကြတယ်…
အားလုံးရှာဖွေပြီးတော့ ကိုမောင်မောင်နဲ့ဦးအေးနိုင်ကိုထားခဲ့ပြီး ကိုယ်တို့၅ယောက်ကို စစ်ရုံးထက်မြင့်
တစ်ယောက်ပိုနေတော့ ကိုယ်နဲ့အန်တီစန်းက အိပ်စင်တစ်ခုမှာ၂ယောက်အိပ်ရတယ်…..ကိုယ်တို့ကို
စောင့်ရှောင့် ကျွေးမွေးဘို့ ရဲမေ၂ယောက်ထားတယ်….ထမင်းလည်းအရေးတကြီးချက်ကျွေးတယ်….ရောက်ခါစ
ဆိုတော့မိန်းကလေးတွေရော ယောင်္ကျားလေးတွေရော လာကြ သတင်းမေးကြပေါ့….
ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ခံ သန်းဇော် ကလည်း ရေအဆင်သင့်သုံးရအောင် ရေတစ်ပုံးဆွဲပြီးလာပို့တယ်…
တယ်….အနွေးထည်တွေလာပေးကြတယ်….ဘာမှအားမနာဘို့ သားသမီးတွေနဲ့နောက်နေ့ပေးတွေ့မှာဖြစ်တဲ့ အကြောင်းပြောပြကြတယ်…မိန်းကလေးအုပ်စုက သူတို့မိဘတွေလာသလိုမျိုးပျော်နေကြတယ်……..
( ၂၀.၃.၁၉၉၂ )
မနက်စောစောထတော့ ကုတင်ခြေရင်းမှာ ရေတွေနင်းမိလို့အန်တီစန်းကိုပြောလိုက်တယ်….အန်တီစန်း
.အေးအေးဆေးဆေး အားမနာဘဲနေကြဘို့ ကလေး
ဒီ၁၇နှစ်သားသာရှိသေးတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတပ်စုက တပ်သားတာတီးပိုးက
သူ့ပြောကြားချက်အရ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုဖမ်းပြီး လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထားတာ….အဲဒီကျောင်းသားက ဂါထာမန္တယားတွေရွတ်တော့ ကြိုးပြေသွားတာကို….မင်းဂါထာကတယ်အစွမ်းထက်ပါလား…
.နောက်မင်းကြိုးမပြေရအောင် ရွတ်ချင်တဲ့ဂါထာရွတ်ဆိုပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာကပ်ပြီး
ဓါးမြှောင်နဲ့ထိုးစိုက်ပြီး တစ်ညလုံးပစ်ထားလိုက်တာ သွေးလွန်ပြီးသေသွားတယ်လို့
ဂုဏ်ယူပြီးပြောတာ ရွံရှာစွာနဲ့ဘဲ နားထောင်နေရတယ်…..
၀က်သား အာလူး ၊ အမဲသားအာလူး၊ ကြက်ဥကြော်တစ်ပတ်(၂)ခါလောက်စားရတယ်…..
ကျန်တာကမုန်ညင်းကို ချဉ်ရည်ချက်လိုက် ကြော်လိုက်၊ဂေါ်ဖီကြော်၊ မြေပဲကြော်၊အမျိုးမျိုးကို ရှိတာလေးနဲ့ဖြစ်အောင်ချက်ကျွေးတတ်တဲ့
အေးကလည်းအေးတော့ ရောက်တဲ့နေ့ကစပြီး မီးဖိုမှာမီးလှုံရင်း စကားပြောရတယ်
.ထုတ်တန်းမှာဝါးလုံးတန်းပြီး တန်းမှာသံကြိုးတချောင်းချပြီး အဖျားမှာချိတ်တစ်ခုတပ်ပြီး
.သားသမီးတွေအသက်ရှင်ရေးအတွက် သက်စွန့်ဆံဖျား သူပုန်စခန်းလာပြီး
သူတို့ဓလေ့ သူတို့ထုံးစံအတိုင်း နေရတာလို့ အောင့်မေ့မိတယ်….
ညနေစာစားပြီးတော့ ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်ကို ဘိုဘိုနဲ့တွေ့ဘို့ခေါ်တယ်….
သားသမီးတွေနဲ့မတွေ့ရတော့တာ ခုမှပြန်တွေ့ရတော့ ဝမ်းသာဝမ်းနဲဖြစ်ကြတာပေါ့….
မမြင့်ကြည်နဲ့အရီကို သူတို့သားတွေနဲ့ပေးတွေ့ပြီး ဥက္ကဋ္ဌ တဲမှာ VIDEO ကြည့်ဘို့ ခေါ်သွားတယ်တဲ့…
ကျော်တဲ့အထိပြန်မလာဘူး…တဲမှာက ကိုယ်ရယ် ကိုမောင်မောင်ရယ်…
အဲဒါဒီနေ့တော့ မတွေ့ရတော့ဘူး ထင်ပြီး အိပ်ယာထဲဝင်အိပ်နေလိုက်တယ်….၁၅မိနစ်လောက်ကြာတော့
ခဏနေတော့ ဦးအေးနိုင်သား ကျော်နိုင်ဦးနဲ့ ကိုယ့်သား ရဲလင်းတို့နှစ်ယောက်တွဲဝင်လာတယ်…
ခုလည်းသူများတွေလာလာခေါ်လို့ သူတို့ကိုလည်းလာခေါ်မှာဘဲဆိုပြီး စောင့်နေကြတာတဲ့….
သားက သူန၀တထောက်လှမ်းရေးအလုပ်ကို ၁၉၈၅ထဲကလုပ်တာတဲ့… .ငွေယားတောင်ကိုဗိုလ်သင်တန်း
.ဘဏ်မှာလုပ်တာက ထလရ အလုပ်ကိုကာဘာယူဘို့လုပ်တာ….
လစာ၅၅၀ ကျပ်ရတာကိုလည်း အမေမသိအောင် သုံးပစ်တာတဲ့…..
ကြောက်လို့ လန့်လို့ လိမ်ပြီးပြောတဲ့ လိမ်စဉ်ဇာတ်လမ်းဆိုတာ…
. တစ်လျှောက်လုံးလည်းVIDEO ကရိုက်နေတယ်…
.သားကိုမေမေသိတာက ကျောင်းသားအရေးကိစ္စနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့ဘဲသိတယ်…
မင်းအဖေလည်းဒီစာရတော့ တက်တခေါက်ခေါက် ဖြစ်နေတယ်….လို့ပြောလိုက်တယ်….
အဲဒီတော့သန်းဇော်က ဒီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာ မိဘတွေမသိဘဲ လုပ်ခိုင်းတာဘဲ….
.ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ငါ့သားဟာ န၀တ ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ဖူး…
သူတို့လက်ခုတ်ထဲကရေဖြစ်နေတော့ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေရတယ်…..
ကလေးတွေကျန်းမာရေးအခြေအနေ မကောင်းတဲ့အကြောင်း ပြောကြတယ်…
ထောက်လှမ်းရေးတဲမှာဘဲ…မိဘတစ်ဦးချင်းရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ရေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေပြောပြချက်အရ ထောက်လှမ်းရေးလုပ်မှန်းသိရပါတယ်…
အားလုံးလည်း ဒီစာသားအတိုင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရတာပါ…..
ကလေးတွေနဲ့တွေ့ရတော့ နဲနဲစိတ်ချမ်းသာပြီး အိပ်ပျော်သွားကြတယ်……
by Ko Lin Wai Aung on Saturday, March 10, 2012 at 10:53am ·
မနက်စောစောထ ဘုရားရှီခိုးပြီး မီးကိုအရေးတကြီးမွှေးရတယ်…
ထမင်းမစားခင် ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေ
ထောက်လှမ်းရေးသန်းဇော်နဲ့ ကိုယ်တို့(၇)ယောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားကြတယ်…
မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ ပါဂျောင်ချောင်းဘက် လိုက်ပြမယ်ဆိုပြီး ထလရတာဝန်ခံသန်းဇော်၊တာတီးပိုး(ခ)သက်လင်း၊ဖိုးနှောင်း ၊သက်ထွန်း၊ဂျပန်သတင်းထောက်နဲ့
.လိုင်စင်စခန်းကနေပြီးဟိုဘက် KIA လားတပ်ရှိတဲ့ဘက်ကို သွားတဲ့လမ်း….
ပါဂျောင်ချောင်းက ကိုယ်တို့နေတဲ့နေရာရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတယ်…
ကိုယ်တို့က ပါဂျောင်တံတားပေါ်ကနေ ရပ်ကြည့် နေကြတယ်…
တွေ တောင်အောက်ကို လှမ်းကြည့်တယ်…
.ကလေးတွေမြင်ရမလားဆိုပြီး သူတို့နေတဲ့ တောင်ကုန်းကို လှမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်…
၂း၀၀နာရီလောက် ဥက္ကဋ္ဌကVIDEO ကြည့်ဘို့ဆိုပြီး လာခေါ်တော့ အားလုံးတောင်ဝှေးတွေထောက်ပြီးလိုက်သွားကြတယ်…
ဟိုကျတော့စကားတွေပြောရင်း VIDEO အခွေ ဖွင့်ပြတယ်….. သူတို့ထောက်လှမ်းရေးလို့စွပ်စွဲထားတဲ့သူတွေကို စစ်ချက်ယူနေတဲ့ ပုံတွေဘဲ….
ကြည့်ရတာ လိမ်ထားတာတွေဆိုတာသိရတော့ မကြည့်ချင်ဘူးပေါ့…
.ပထမ ကိုစိန် ကိုစစ်ချက်ယူနေတဲ့ပုံ
.သူ့ရှေ့စက္ကူပေါ်မှာလည်း အဆိပ်မှုန့်လို့ပြောတဲ့ အမှုန့်တွေ…
.အဆိပ်အာနိသင်ကလည်း စားရင်ချက်ချင်း မသေဘဲ တဖြည်းဖြည်းမှ သေတယ်တဲ့….
နောက် ကိုယ့်သား ရဲလင်း အလှည့်လည်းရောက်ရော
.ငယ်ငယ်က ဘယ်လောက်စိတ်ညစ်ညစ် ပြုံးနေတတ်တဲ့အကျင့်…
.၂၀.၃.၁၉၉၂နေ့က တွေ့တဲ့ပုံနဲ့ လုံးဝမတူဘူး….
အန်တီတို့က နောက်ပိုင်းမှာလည်း အလုပ်တွေနဲ့…
.မကျန်းမာတဲ့သူကလည်း မမာဘူး….အိမ်ကိုပြန်ချင်ကြ ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း
ဒါကြောင့်ကလေးတွေကို မိဘတွေနဲ့ယခုမထည့်နိုင်သေးကြောင်း ပြောတယ်…..
အဲဒီလိုပြောတော့ အားလုံးက …
အဲဒီလိုဆိုရင် သားသမီးတွေနဲ့ အတူဒို့လည်း ပြစ်ဒဏ်ခံယူမယ်…
မိဘတွေမှာ ဘာအပြစ်မှမရှိလို့ အပြစ်ပေးစရာ
အန်တီကြီးကငိုပြီး ခြေသလုံးဖက်မယ်လုပ်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့ကို
.အားလုံးကလက်တို့ပြီး ထမင်းမစားဘဲအစာငတ်ခံမယ်လို့ လုပ်ထားကြတယ်….
.စားလို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုပြီး အားလုံးကငြင်းကြတော့ …..
.ကိုယ်တို့လည်း သားသမီးတွေနဲ့ပေးမတွေ့မှာစိုးလို့ လန့်ပြီးထမင်းစားရတယ်…
ကလေးတွေရဲ့ သဘောထားလည်းမေးကြည့်ပါ ဦးလေလို့ပြောတယ်…
.မနက်စာစားပြီး ၁၂း၀၀နာရီလောက် ကိုယ့်ကို အရင်လာခေါ်တယ်….ဒီတစ်ခါတော့စစ်ရုံးထဲမှာတွေ့ရတယ်…
…ကြက်ခြေနီလိုအဖွဲ့အစည်းတခုခုက လာခေါ်ရင်လိုက်မှာပါလို့ ပြောတယ်…
ကိုယ့်ခြေထောက်ကို သူ့ခြေဖျားနဲ့ တို့ပြီးမျက်ရိပ်ပြတယ်…
.အဲဒါနဲ့ လူကြီးတွေကတော့ ကလေးတွေမပါရင်မပြန်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်လို့ပြောပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်….
.သူတို့၎ယောက်ကိုဗိုလ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး အရေးပါတဲ့သူတွေမို့ မလွှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောတာတဲ့…
..ညနေစာစားပြီး စကားပြောကြပြီး အိပ်ယာဝင်ကြတယ်….
မနက်အိပ်ယာထ မျက်နှာသစ် ရွတ်ဖတ်ပြီးတဲပြင်ထွက်ကြည့်တော့
ကိုယ်တို့ ကလေး၅ယောက် (နန်းအောင်ထွေးကြည်နဲ့ဘိုဘိုမပါ)
အနားကတာတီးပိုးတို့ကို ဘာလုပ်နေတာလဲမေးတော့ အန်တီတို့ကလေးတွေကိုလွှတ်လိုက်ပြီလေဆိုပြီးပြောတော့…..
ဂတုံးတွေနဲ့ ခါးပတ်အဖြူတွေနဲ့ဆိုတော့ ထောင်ထွက်တွေမှန်းသိသာတယ်…
.သူတို့လည်းထွက်လာကာစဆိုတော့ ရေခပ်ဆင်းလိုက် လိုတာသွားယူလိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုတ်နေကြတယ်….
ဘိုဘိုနဲ့နန်းအောင်ထွေးကြည်က ပရိုတင်း(PRO- TEAM) မှာနေရတယ်…
တစ်ချို့….အဲဒီနောက်မှာတော့ ထောင်ထဲက ကလေးတွေထိုင်ကြတယ်…
.ညာဘက်ထိပ်ဆုံးမှာတော့ ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့
…နောက်ပြီး NLD ကတောခိုလာတဲ့၅ယောက်
.နောက်မှKIA ကန်တင်း(CANTEEN) က တာဝန်ခံမနှင်းမေဆိုတာသိရတယ်…
အားလုံးနေရာယူပြီးတော့ ခန်းမဆောင်ဖွင့်ဘို့အတွက် အားလုံးအပြင်ထွက်ပေးရတယ်…
.ကိုမောင်မောင်က ကိုယ့်သားနဲ့အတူထိုင်ရအောင် စီစဉ်လိုက်တယ်….
KIA, NLD ကပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊တက်မှာဘဲလို့ တွက်ထားကြတယ်….
KIA ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ကပြောတယ်…
.NLD ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဆို စင်ပေါ်ကိုမျက်နှာမရောက်ဘူး….
NLD ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက အပေါ့သွားရာကအပြန် ကိုယ့်ကိုလာနှုတ်ဆက်တယ်….
.ဘိုဘိုနဲ့နန်းအောင်ထွေးကြည်တို့လည်း ဆိုခိုင်းလို့သာဆိုရတာ မျက်နှာမကောင်းကြဘူး….
အကောက်ကြံရင် ထောင်ဆူပစ်မယ်လို့ တိုင်ပင်ထားကြတာတဲ့….
ဆိုပြီး လူ၆ယောက်…ထင်း၆စည်း…သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ လာပို့သွားကြတယ်
တာတီးပိုးကအန်တီတို့သားတွေလည်း အန်တီတို့မလာခင်က ဒီလိုဘဲလုပ်ရတာတဲ့….တဲဆောက်တဲ့သူကဆောက်…၀ါးခုတ်တဲ့သူကခုတ်…
ထရံယက်တဲ့သူကရက်နဲ့ ထမင်းစားချိန်ဘဲနားရတယ်တဲ့….. )
တန်းစီပြီးထွက်လာတော့ NLD ကကိုယ်စားလှယ်တွေ
မနက်စောစော ထပြီး မျက်နှာသစ် ဘုရားစာရွတ်ကြတယ်…
.ရောက်ခါစက ကိုမောင်မောင်နဲ့ဦးအေးနိုင်က သူတို့တဲမှာထမင်းစားပြီးမှ ဆင်းလာကြတယ်…. ခုတော့ကိုယ်တို့တဲမှာဘဲစုစားကြတယ်…
ထမင်းစားတိုင်းဦးအေး နိုင်က ထမင်းစားမြန်တော့ အရင်ကုန်တာကိုး…
အဲဒါကျုပ်ပန်းကန်ကပေါက်နေလို့ဆိုပြီး ဟာသပြော ပြီးထပ် ထည့်စားတယ်….ရောက်ခါစကသိပ်စားလို့မကောင်းဘူး
ကိုယ်တို့ကိုကျွေးတာ သူတို့စားနေကျ ရာရှင်ထက်
ဆက်သွယ်ရေးစက်ကို ၁နာရီတစ်ခါဖွင့်ရတော့ ကိုယ်တို့တဲပေါ်လာပြီးနားထောင်တယ်….
…ဧည့်သည် တွေပြန်သွားပြီလား ၀က်ဝံကိုယ်စားဘယ်သူလာလဲမေးတော့ သူ့မားသားကြီးလာတယ်ပြောတယ်
…နောက်မှဝက် ၀ံဆိုတာ အမျိုးသမီးကိုပြောမှန်းသိရတယ်….
. လူသေကိုအုပ်တဲ့ပလတ်စတစ်တောင် ကိုယ်တို့တက်နင်းပြီး
ဆင်းရတက်ရတာနောက်မှသိရတော့ ဖယ်ခိုင်း ပစ်ရတယ်…
သူတို့ကလည်းညတိုင်း လူသေတွေအကြောင်း သရဲတစ္ဆေတွေအကြောင်းပြောနေတော့
.ပြောပါများလွန်းတော့ အန်တီကြီးတို့အန်တီစန်းတို့လည်း ကြောက်လာကြတယ်…
တာတီးပိုးကိုလည်း စိတ်ဓာတ်ကျအောင် သရဲအကြောင်း အစိမ်းသေတွေမကျွတ်ဘဲ သတ်တဲ့သူကိုပြန်ပြီးခြောက် လှန့်ကြောင်းပြောတော့သူလည်းကြောက်လန့်ပြီး ညဘက်ဆို ကိုယ်တို့တဲကိုမလာရဲတော့ဘူး…..
နေ့လည်ကျတော့ ကျန်တဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေက ( ဥက္ကဋ္ဌ မပါ) သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောတယ်..
ဗိုလ်အဆင့်ရှိတဲ့( ၄ )ဦးကိုမလွှတ်ဘူး….
.ကျန်တဲ့( ၃ )ဦးကိုစဉ်းစားဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်…
.နောက်ဆုံး၃ဦး၃ဖလှယ် ဆွေးနွေးဘို့ ပြောပြီး ကိုယ့်တဲကိုယ်ပြန်ကြတယ်….
မနက်စောစောထပြီး လိုင်စင်ဈေးနေ့မှာ ကလေးတွေကိုခေါ်သွားပြီး
ရှမ်းခေါက်ဆွဲကျွေး လ္ဘက်ရည်တိုက် တယ်….
သား တွေကိုဘုရားတရားမမေ့ဘို့ ဂါထာတွေရွတ်ဖို့ပြောရတယ်…
KIA ကဗိုလ်မှူးကြီး လဇန်ဘောက်ဆိုတာနဲ့တွေ့တော့
မနက်စာစားပြီး KIA အရာရှိကားတစ်စင်းရပ်တာတွေ့တယ်…
သူတို့KIA တပ်မှာဒီလောက်ထောက်လှမ်းရေးများများ မဖမ်းမိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း….
ကလေးတွေလွတ်လမ်းကိုကူညီနိုင်ဘို့ အလားအလာမရှိကြောင်း အန်တီကြီးသိလာတယ်..
ဒီနေ့တော့ IO ရုံးမှာကိုယ်တို့ကလေး၎ယောက်ကို မိဘတွေနဲ့ပေးတွေ့တယ်… ဥက္ကဋ္ဌလည်းပါတယ်… ကလေးတွေကိုယခုမိဘတွေနဲ့အတူမထည့်နိုင်သေးကြောင်း
ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီ ( သို့ )
လွတ်လပ်သောအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုခုမှ လာပါကထည့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း
မိဘနဲ့သူတို့ကော်မတီဝင်များ ကတိဝန်ခံလက်မှတ်ရေး ထိုးရတယ်…
( ၁ ) ကလေးတွေကို နောက်ထပ် ထလရ မလုပ်ရပါဘူး…
( ၃ ) ကြက်ခြေနီ( သို့ ) လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုလာပါက ထည့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေး ထိုးကြတယ်….
သူတို့ပေးတဲ့ကတိကို မဖျက်ပါဘူးဆိုတာ အထပ်ထပ်ကတိပေးလိုက်တယ်….
အားလုံး ကိုယ့်တဲ ကိုယ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်….
မနက်စာထမင်းစားပြီးလိုင်စင်ဈေးသွား လ္ဘက်ရည်တိုက် ကြက်ဥတို့ ထန်းလျှက်တို့ဝယ်ပေးလိုက်တယ်..
ကျန်တဲ့ကလေး၃ယောက်ကို လွှတ်မယ် ထင်နေတော့
ညနေကျတော့ကလေး(၃) ဦးရဲ့မိဘတွေနဲ့ ခေါ်တွေ့တယ်…
လွှတ်တော့လွှတ် မှာ ဒါပေမယ့်အခုမထည့်နိုင်သေးကြောင်း
( တောင်ပိုင်း ဗဟိုတွင် ၂ ခြမ်းကွဲပြီး နေဝင်းအာင်စိုးလင်းကို နိူင်အောင်ဖက်မှာ ချုပ်ထားပြီး မိုးသီး အမိန့် နှင့် ဌေးနိူင်ကို သတ်လိုက်သည့် ကာလများဖြစ်နေသည် ။ဌေးတင့် ၁၂ မတ်လ ၂၀၁၂ရေးသား )
.အ်ိမ်ပြန်ချင်ပါက တစ်ယောက်ချန်ခဲ့ပြီး အားလုံးပြန်နိုင်ကြောင်း ပြောတော့…
ဒီနေ့မှာတော့ ကလေးတွေအားလုံးနဲ့တွေ့ပေးမယ်ဆိုလို့ မနက်ကတည်းကလာအခေါ်ကိုစောင့်နေကြ တယ်…
.စောင့်ရင်းနဲ့ ညနေစာထမင်းစားပြီးတော့ ဒီနေ့တော့ခေါ်မတွေ့တော့ဘူးထင်တာ…
အရီကိုခေါ်ပြီး ထလရ တဲကိုဆင်းသွားတယ်
…ရေချောင်းဘေးမှာတင်စန်းဦး၊မငွေ၊နဲ့တာတီးပိုးတို့ ပန်းကန် တွေဆေးနေတာတွေ့လို့….
အေးအဲဒီအစီအစဉ်ပျက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်း နင်တို့ဥက္ကဋ္ဌကိုသွားပြော ပေး…
.ထလရ တဲမှာဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့၊ ကလေးတွေ မိဘတွေဆုံနေကြပြီး
ဥက္ကဋ္ဌက ကလေးတွေထားခဲ့ပြီး ပြန်ကြဘို့နဲ့….
ပထမ မမြင့်မြင့်ကြည်နဲ့အန်တီစန်းက တခါတည်းပြန်ထည့်ဘို့ပြောတယ်….
ပြောပြီး တစ်ယောက်စောင့်နေခဲ့ဘို့ပြော တယ်….
.ကိုမောင်မောင်က တစ်ယောက်ကျန်နေရင် အဲဒီတစ်ယောက်နဲ့ သူလည်းနေခဲ့မယ်…
.ကလေးတွေနဲ့တိုးတိုးတိုင်ပင်ကြတော့ နောက်၂လကြာမှ၃ဦးအဖွဲ့က ပြန်လာမယ်…
၅.၄.၁၉၉၂ လို့သပ်မှတ်ပြီး ကားစီစဉ်ဘို့ပြောလိုက်ကြတယ်…
.ကလေးတွေအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်မိတဲ့အတွက် လုံခြုံမှု ရှိအောင်အပ်ခဲ့ရတယ်….
ကတိပြုကြပြီး… မပြန်ခင်ကလေးတွေနဲ့ အတူနေဘို့ခွင့်တောင်းတယ်
ဘိုဘိုနဲ့နန်းအောင်ထွေးကြည်ကတော့ သူတို့အမေတွေနဲ့ အတူညအိပ်ခွင့်ရတယ်….
ကိုယ်တို့ကိုမာစကတ်နဲ့ ထန်းလျှက်တွေလာပေးသွား တယ်….
.တာတီးပိုးကလည်းပြန်ကာနီး အန်တီကြီးကို အဖွားအဖွားနဲ့ခေါ်ပြီး …..
ကိုယ်တို့ ထမင်းစားရင် သူလည်းဆာပြီဆိုပြီး ၀င်ဝင်စားတယ်…
..ည၁၀း၀၀နာရီထိကလေးတွေနဲ့ပြောကြဆိုကြပြီး သူတို့ ပြန်တော့အိပ်ယာဝင်ကြတယ်….
.ညနေစာစားပြီးတော့ကျော်နိုင်ဦးကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မလာကြတော့ဘူး…
.ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖို့အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပဋ္ဌာန်းတိုက်နေကြတယ်တဲ့…
.အလ္လာပ သလ္လာပ ပြောလိုက် ကိုယ်တို့ကိစ္စတွေပြောလိုက် အကူအညီတောင်းလိုက်နဲ့ပေါ့…
.၁၀း၀၀နာရီကျော်တော့ ကိုယ်တို့လည်းအိပ်လိုက် ကြတယ်….
.မနက်စာကိုမ စားတော့ပါဘူးဆိုတော့ အန်တီတို့စားပြီးမှသွားရမှာလို့ပြောတယ်….ထမင်းလည်းမစားချင်ကြတော့ဘူး…
တင်စန်း ဦးနဲ့မငွေတို့ကဈေးကအပြန် အီကြာကွေးတွေလာပေးတယ်…
.မမြင့်ကြည်ကလည်း ညကအိပ်ရေးပျက်လို့ ခေါင်းမူးပြီးအန်…
ကျန်တဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေနဲ့ အဖွဲ့တွေက ဘေးကနေပြီး လိုအပ်တာတွေညွှန်ကြားနေတယ်…
.ကိုယ်တို့သားသမီးတွေအသားမစားရတာကြာလို့ စားလိုက်ကြတာ ၅ပန်းကန်လောက်ကုန်တယ်…
.ကျောင်းသားတပ်ကရဲဘော်တွေက လားသေရင်အသားစားရတော့မယ်ဆိုပြီး ပျော်ပြီးဒါးသွေး နေကြတယ်တဲ့…
.ကိုယ်လည်းသားကို အနားခေါ်ပြီး ကြက်ခြေနီလာရင်လိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်ခဲ့ဘို့နဲ့…
(၅၀၁)ရင်းမှူးသိုက်ထွန်း ဦးကလည်းမိဘတွေ လာတာအားကျနေလားမသိဘူး…
.ဒါနဲ့ ၁၂းး၃၅ရှိတော့ ကားကရောက်နေပြီ…
.ကားဆီသွားကြတယ်…. ကားနားမှာ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့လည်းရောက်နေတယ်…
.ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ကလည်း ကိုယ်တို့ ရှိနေတုံး
သူတို့မှားတာလွန်တာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါဆိုပြီး လက်အုပ်ချီကန်တော့တယ်….
.ကားပေါ်တက်ခါနီးမှာ ကလေးတွေအားလုံး ထိုင်ပြီးကန်တော့ကြတော့ မျက်ရည်မဆယ်နိုင်ကြဘူး…
မျက်ရည်မ ကျအောင်ထိမ်းနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်တို့မိဘတွေကတော့
မျက်ရည်တွေရှိုက်သံတွေနဲ့ ကားခေါ်ဆောင်ရာကိုပါခဲ့ ရတယ်……
.သားသမီးတွေမပါလာတဲ့ အတွက် အလိုမကျဖြစ်တော့ ပိုပြီးမွန်းကြပ်လာတယ်…..
.PASSPORT ထုတ်ပြီးဆက်ထွက်လာကြတာ ၄း၃၀တော့ယင်ကျန်းရောက်တယ်…
.ကားပေါ်မှာလည်း ဘိုဘိုတို့ နန်းအောင်ထွေးကြည်တို့သီချင်းတွေဖွင့်လာတော့
သူတို့ မိဘတွေမဆိုထားနဲ့ ကျန်တဲ့မိဘတွေတောင်မျက်ရည်ကျရတယ်…
.ဆက်ထွက်လာကြတာည၁၂း၀၀မှာ ရွှေလီကို ရောက်တယ်…
ကျော်မြင့်နဲ့ဂျပန်သတင်းထောက်ကဓာတ်ဆီထည့်ပြီးဆက်ထွက်သွားကြတယ်.... ကိုယ်တို့က ငြိမ်းချမ်းတည်းခိုခန်းမှာတည်းကြတယ်….
ABSDF(မြောက်ပိုင်း)သတ်ဖြတ်မှုများနှင့်မိခင်တဦး၏ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း - အပိုင်း - ၄ (ဇာတ်သိမ်း)
by Ko Lin Wai Aung on Saturday, March 10, 2012 at 11:05am ·
မနက်၇း၀၀နာရီလောက် ချစ်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်သွားပြီး အစာပြေစားကြတယ်….ကျော်မြင့်ကပြန်မရောက်သေး ဘူး…..CS သံချောင်းလည်းမတွေ့ဘူး ဆေးရုံမှာလို့ပြောတယ်…. ဘယ်သူမှမတွေ့တော့ဘူး…. တရုပ်ငွေနဲ့ဗမာငွေလဲပြီးဈေးဝယ်ဘို့ကုန်တိုက်တွေလိုက်ကြည့်ကြတယ်….ခရီးစရိတ်ချန်ပြီး ဗမာငွေ၃၀၀ကို တရုပ် ငွေနဲ့လဲတာ ၂၀ကျပ်ရတယ်… စလင်းဘက်တစ်အိပ်၁၅ကျပ်နဲ့ ထီးတစ်လက်၅ကျပ်၅၀ကျတယ်…. အားလုံးဈေးဝယ်ကြပြီးတော့ ၂း၀၀နာရီထိုးပြီ…..၂း၃၀နာရီမှာ ရွှေလီကတရုပ်ကားနဲ့ ကြယ်ဂေါင်ကိုပြန်လာကြ တယ်… ကြယ်ဂေါင်မှာPASSPORT အပ်ပြီးဂိတ်တွေမပိတ်သေးတာနဲ့ လာတုံးကအတိုင်း ဈေးတန်းတွေဘက် ဗမာပြည်ဘက်ကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ကြတယ်….မူဆယ်ရောက်တော့ လှိုင်းတက်တည်းခိုခန်းမှာတည်းကြတယ်…. ကိုမောင်မောင်က မူဆယ်ထောက်လှမ်းရေးကိုမေးပြီးမှ လားရှိုးလက်မှတ်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးမူဆယ်ထလရကိုသွားတာ လက်မှတ်မ၀ယ်ပါနဲ့ဦး မနက်၇း၀၀နာရီသူတို့နဲ့လာတွေ့ပါဦးဆိုလို့ မူဆယ်မှာ၂ညအိပ်ရတယ်….မနက်ကျတော့ ဗိုလ်ကြီးအောင်ကျော်ဦးဆိုတာနဲ့တွေ့လို့ ကလေးတွေမပါတဲ့အကြောင်းပြောတယ်….သူတို့လည်းပါလာလိမ့်မယ် ထင်တာ….သူ့ညီတွေလိုသဘောထားပါတယ်…စိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောတယ်….မေးစရာရှိတာမေးပြီး ကိုယ်တို့ကိုမူဆယ်ဈေးအထိလိုက်ပို့တယ်….ဈေးထဲလျှောက်ကြည့်ပြီး တည်းခိုခန်းပြန်နားကြတယ်….
အန်တီစန်းကဟိုဘက်မှာရွှေလီမြစ်ရှိတယ်… တောင်တွေတောတွေရှိတယ်…သွားကြည့်မယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားတယ်… ကိုယ်လည်းအရီနဲ့ရွှေလီမြစ်ကမ်းဘေး လမ်းလျှောက်ပြီး အန်တီစန်းလဲမတွေ့တာနဲ့ တည်းခို ခန်းပြန်လာနား….ခဏနေတော့မူဆယ်ဈေးထဲသွားပြီး စားစရာ…အထည်နဲနဲပါးပါးဝယ်ပြီး ပြန်အိပ်တယ်….
ဦးအေးနိုင်တို့က ကိုမောင်မောင်အိမ်ကို ၉ရက်၁၀ရက်နေ့လောက်ပြန်ရောက်မယ်လို့ကြေးနန်းရိုက်တယ်. မူဆယ်မှာ ၇.၄.၁၉၉၂နေ့ထိနေရတယ်...
မူဆယ်ကနေမနက် ၅း၃၀ ကားထွက်တယ်….အားလုံးနွမ်းလျှပြီးပြန်လာကြတယ်…ကွတ်ခိုင်ရောက်တော့ ထလရကိုသတင်းပို့ပြီးတော့ ထမင်း စားကြတယ်…
အဝေး ကကြည့်ရင် နှင်းတောင်တွေလားလို့ထင်ရတယ်….
ဆရာမကလည်း အသွား ကတည်းကသိနေတော့ ကလေးတွေမပါဘူးလားမေးတော့…
ကိုမောင်မောင် က ထောက်လှမ်းရေး၉ကိုသတင်းပို့ရတယ်…
.ထလ၇ကလည်း ကိုယ်တို့နဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ပြော ပေမဲ့ ကလေးတွေမပါလာလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာရော…
လမ်း၃၀မှာဆင်းပြီး ကိုမောင်မောင် အိမ်သွားကြတယ်….
.နောက်မှ အလုံးစုံရှင်းပြရတယ်….ကိုမောင်မောင်အိမ်မှာထမင်းစားပြီး မန္တလေးထလရကိုသတင်းပို့ကြရတယ်…
သင်္ကြန်အထူးရထားနဲ့မနက် ၇း၃၀နာရီမှာ မန္တလေးကထွက်တယ်…
.တောတွေတောင်တွေတွေ့တိုင်း သားတွေရှိတဲ့ဆီဘဲ သတိရနေမိတယ်. လမ်းမှာလည်းသင်္ကြန်နားနီးတော့ တလမ်းလုံးရေပက်ကြတယ်…
.သုဝဏ္ဏကား မရှိတော့ သင်္ဃန်းကျွန်းကားစီးပြီး သူငယ်ချင်းဆရာမကြီးဆီသွားအိပ်ရတယ်…
သူတို့အားလုံးလည်းစိတ်ပူရတဲ့အကြောင်း ခုမှဘဲဝမ်းသာသွားကြောင်းပြောကြတယ်….အထွေထွေလုပ်သားလင်မယားကလည်း ၀မ်းသာအားရပါဘဲ..သူတို့ လည်းစိတ်ပူနေတဲ့အကြောင်း ပြောတယ်…
.အိမ်ရောက်တော့ သူတို့ညီ၊သူတို့မောင်၊သူတို့အစ်ကို မပါတော့အားလုံးမျက်နှာမကောင်းကြဘူး….
.ကိုယ်ကစပြီးအိနြေ္ဒပျက်နေရင် ကလေးတွေပိုစိတ်ထိခိုက်မှာစိုးလို့ အိနြေ္ဒဆည်နေရ တယ်….
အိမ်ရောက်ရင်ဘယ်လို ဖြေရပါ့နဲ့ စိတ်မောလူမော ရှိနေကြတယ်…
ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီ ( သို့ ) လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကအမြန်သွားရောက်ပြီး
ကယ်တင်ပါမှ သားသမီးတွေလွတ်လပ်ခွင့်ရပြီး မိဘနဲ့အမြန်တွေ့ရမယ်…
အဖွဲ့ အစည်းတွေအမြန်သွားရောက် ကယ်ယူရေးအတွက်
မိဘတိုင်းဘုရားမှာအထပ်ထပ် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သနေ ရတယ် …..
ကလေးတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးမိဘရင်ခွင်( သို့ ) ငြိမ်းချမ်းသောရင်ခွင်သို့ ပြန်လည်ရောက်လာပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်……
ခင်ရွှေလှိုင် မပ ၀၀၃၆ မှတ်တမ်းများ(1,2,3,4,5,6,7,8)...
ဒေါက်ချွန် နိူင်အောင် စဉ်းပြီးမှ စားပါ ။ လူသတ်မှု အ...
Burma army moves in to enforce eviction order at M...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မူဝါဒ၊ ရပ်တည်ချ...
လိုအပ် လာတဲ့ အပြောင်းအလဲ
ကျော်ဆန်း ရဲ့ဝါဒဖြန့် ချိရေး အင်ပါယာ
မိခင်တဦး၏ ABSDF(မြောက်ပိုင်း)သတ်ဖြတ်မှု ကိုယ်တွေ့မ...
Open Burma with Army way